Pipe hanger mveliso, ababoneleli - China Pipe hanger Manufacturers
I-Copper Plated Light Duty Clevis kwendawo yokuhlala kwiFektri yokuThengisa ngokuthe ngqo
Njengomnye wabakhuphisi abakhuphisana kakhulu kwinkampani, ii-hanger zethu zomsebenzi oxhonyiweyo zobhedu zifumene ukuthandwa kakhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Umbhobho wokuVala oKhawulezayo ngeRubber
Njengenye yezona ndawo zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, izibopho zethu zokutshixa ngokukhawuleza zixhotyiswe nge-EPDM yokugquma ngerabha yokunciphisa ingxolo ehambelana ne-DIN 4109. Kwaye bafumana udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eYurophu, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kulula ukuvala ngesandla esinye kuphela.
Umsebenzi onzima we-U-Strap kunye neRubber Lining
Njengenye yezona zinto zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, umsebenzi wethu onzima u-straps ngombala werabha ziyilelwe kwaye zacetyiswa ukufakelwa kwemibhobho egqunyiweyo okanye engafakwanga ubushushu, kwaye inokusetyenziswa ngerabha ixhasa ukufakwa. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Kwakhona, kukho unyango umphezulu ezahlukeneyo ukhetho lwakho: Pre-iqaqanjiswa, Zinc ngumfanekiswana, epoxy kunye Gqibezela Green kwalenza ukuhlangabezana neemfuno zakho anticorrosion amanqanaba ahlukeneyo.
Uluhlu lwe-UL kunye ne-FM edwelisiweyo yokuHanjiswa kweNdawo yeeNdawo zokuThengiswa ngokuthe ngqo kweFektri
Njengenye yezona ndawo zixhomekeke kukhuphiswano kwinkampani, iihenjisi zethu ezijikelezayo ezijikelezayo ziyi-UL & FM evunyiweyo. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi eMntla Melika, eMzantsi Melika, kuMbindi Mpuma, eYurophu naseAsia. Kananjalo zinokulungiswa ngokweemfuno zakho, umzekelo, zinokuyilwa ngerabha, ukufaka okanye ikhaka. Kwaye kukho unyango olwahlukileyo oluphezulu kukhetho lwakho.
Pipe Uqinisa Pipe uqinisa
Njengomnye weendawo ezixhomisa amehlo kukhuphiswano lwenkampani, izibopho zethu zokutshixa ngokukhawuleza zikhulula ukukhutshwa kombhobho wamapayipi ngesikere esinye. Kwaye bafumene udumo olukhulu kwihlabathi liphela, ngakumbi iYurophu, Middle East naseAsia. Kwakhona, kulula ukuvala ngesandla esinye kuphela.